Waraani state Iowa Covid-19 waliin godhan akkuma fufeti jira | KWIT
Torbaan kana jalqaba irrati, Iowa call 211 center nama beelama talaali corona virus qabachuu hin dandeene nama umriin isaani 64 fi sanii ol tae bilbilnii tallaali akka qabachuun danda’aniif torbaan kana keessa jalqabame.
Qarqaarsi erga kibxata jalqabe booda, 211 namni umriin isaani deeme 2,123 kan ta’an HyVee pharmacies kan kaluu isaanitti jirutti beelama qabatanii jiru.
State Iowa akka gabaasetti jiraattoni hanga virus kun jalqabee as namni Covid-19 due 5600 akka duanii jiran gabaasan. Deparmantiin manan fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa har’aa namni sababa Covid-19 due 11 yoo tau 489 kan ta’an ammo haarawa qabamanii jiru. Akka qorannoo bulti 14 godhaniiti namni qabame parsantiidhan 3.9% dha.
Woodbury county seat 24 darbee keessati namni haarawa qabame 24 akka tae gabaasan.
Siouxland Community health center torbaan 6 dhuftu kana keessati akka health center program talaali corona virus akka seenu ni’eegama. Sagantaan kunis kan godhamef ummata qarqaara barbaaduu fi sababa Covid-19 tiin warra miidhaman haakima talaaali seeran kennan irraati kan galmaahan ta’a.
Guyyaa jalqaba wagga tokko booda corona virus seene booda, Iowa state University’s president akka himetti faculty, dalaydoota, fi barattootnis bara barumsaa haarawa kan qajelaa ta’e akka eega jiran hime.
President Wendy Wintersteen aka jedheti wagga dhuftu barumsi kan tau class keessati, labs, studios, nyaanni, sochiin barattoota, fi qopheen cumpus akka jalqaba dhukkubni hin jirreti kan deebiu ta’a.